Mpamatsy mpanadio tanana - Mpanamboatra ambongadiny, mpamokatra
Sanitereran'ny bakteria miovaova antibiotika azo avy amin'ny alikaola miabo 75%
Ny Hand Sanitizer dia mandaitra amin'ny famongorana bebe kokoa ny 99,99% amin'ireo mikraoba sy bakteria mahazatra mampidi-doza. Fanadiovana tanana haingana sy mora. Tsy misy akora simika mahery. Mba hampihenana ny bakteria amin'ny tanana sy ny hoditra mety hiteraka aretina. Soso-kevitra amin'ny fampiasana miverimberina.
Orinasa namboarina 75% Alikaola avy hatrany Saniteran'ny bakteria fanefitry ny bakteria